Ego | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Enweghị mkpuchi ego: ngwọta zuru oke maka ndị nwe ụgbọ ala
Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala nwere mmasị na ajụjụ nke mkpuchi na-akparaghị ókè. Nke a bụ ụdị iwu nke nwere ike ịchịkwa igwe ahụ ọ bụghị naanị site n'aka onye nwe obodo, kamakwa site n'aka ndị ọzọ. Asambodo na-enweghị ...
Ihe ịrịba ama ego. Nchịkọta nke nkeji ego nke ụwa
Ego kachasị eji eme ihe na mba dị iche iche nke ụwa nwere mmetụta dị ukwuu na usoro na ahịa ahịa. Onwere ego a na-egosi site na akara puru iche. Ọ na-eme ka ọ bụla n'ime ha recognizable ...
Ebee ka eji agbazinye ego ngwa ngwa, ọ bụrụgodị na enwere ego mgbazinye ego?
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche ebe ha ga-esi gbaziri ego ngwa ngwa. Ajụjụ a dị ezigbo mkpa. E kwuwerị, ọ dịghị onye ọ bụla nọ n'ọnọdụ nsogbu. Eleghi anya ego "nth" ga ...
Iheoma - kedu ihe ọ bụ? Ndewo olu oma
Ugboro ole ka anyị na-arịọ maka ọrụ ndị a ma ọ bụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche nke ndị enyi gwara anyị? Kedu ihe mere anyị ji zụrụ ngwaahịa ndị kachasị arụ ọrụ? Ọ bụghị naanị na ndị na-emepụta ihe na-emefu otutu ihe ...
Etu esi ewepu ego na "Steam"? Ebibi thsgha
Yabụ, taa anyị ga-ahụ gị ka ị ga-esi wepu ego na Steam, ma nwaakwa ịchọpụta etu echiche anyị dị. Ihe bụ na okwu a na-eju ọtụtụ ndị ọrụ anya. Yabụ ...
The Norwegian krone bụ akwụkwọ isi obodo Norway
Mgbe a jụrụ m ego ọ dị na Norway taa, a na-echeta ọnọdụ nke mba ahụ ozugbo. Ọ bụrụ na Norway dị na Europe, ego ahụ kwesịrị ịbụ euro. Ma nke a bụ ...
Kedu ụgwọ, ọ bụrụ na etinyeghị ya na mkpuchi ahụ, ị ​​nwere ike ịkwụ ụgwọ
E nyere iwu banyere mkpuchi mmanye ogologo oge gara aga, ọ na-enye maka ị nweta iwu mkpuchi maka CTP. Ma ọ bụrụ na ị gbanahụ akwụkwọ a, maọbụ ị hapụrụ ya n'ụlọ, ma ọ bụ ịdebanye mkpuchi ahụ ...
“Penshion penshion” - ntinye aka na Sberbank. Okwu na Mmasị
Sberbank bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ego kachasị na Russia. Ndị ahịa ya abụghị naanị ndị nnọchi anya azụmaahịa na ndị mmadụ n'otu n'otu, kamakwa, ndị Russia nkịtị nwere oke ego ha na-enweta. N'agbanyeghị ...
LCD "New Okhta" na St. Petersburg: nyocha, nkọwa na nyocha
Taa, e nwere ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mpaghara ịta ahịhịa na St. Petersburg. Ndị bi n'obodo ukwu ahụ chọrọ ụlọ, ma ọnụ ahịa ya na obodo ya dị elu nke na ịzụta ụlọ, ọbụna na mpaghara ndị kasị mara mma ...
Kedu esi enweta ala maka iwu ụlọ obibi? Kedu otu esi ahọrọ ala maka iwuru ụlọ?
Eleghi anya, na mba anyị, ọ dịghị onye na-enweghị nrọ nke ụlọ ya. N'ezie, enwere ụzọ dị iche iche iji nweta ya, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịzụta ụlọ dị njikere. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-arọ nrọ banyere ...
Gostinka. Kedu ihe ọ bụ, olee atụmatụ na uru nke ụlọ a?
N'agbanyeghị nsogbu akụ na ụba, onu oriri, mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọchịchọ maka ụlọ ga-adị. E kwuwerị, ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na institutes ma hapụ ụlọ nnabata ha, ụfọdụ di na nwunye, ọ dị mwute ikwu na ịgba alụkwaghịm ma na-agbanwe ego ...
Kedu ihe na-atụ egwu maka ịkwụ ụgwọ nke ego ahụ? Enwere m ike ịkwụ ụgwọ mbinye ego ahụ, gịnị ga-esi na ya pụta?
Ọ na - eme na mmadụ na - ewepụta ego site na ụlọ akụ wee, n'ihi ọnọdụ ma ọ bụ site na enweghị njikere ịkwụ ụgwọ, anaghị akwụ ụgwọ kwa ọnwa. Na ndị dị otú ahụ n'ọnọdụ, ọkwa si a ego institution ...
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,547.